AKHRISO:- Shirkadda Korontada BECO Oo Dacwad Lala Yaabo Ka Gudbisay Qaar Kamid Ah Shirkadaha Suuqa Kula Loolama, (Warbixin Xasaasi Ah) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA AKHRISO:- Shirkadda Korontada BECO Oo Dacwad Lala Yaabo Ka Gudbisay Qaar Kamid...
Shirkadda Korontada ee Banaadir Electoronig Company oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano BECO ayaa u gudbisay maxkamadda gobolka dacwad ka dhan ah shirkadaha suuqa kula jira ee dhanka loollanka koronto bixinta.
Muqdisho Power iyo Sky Blue ayaa ah labada shirkadood ee la tartamaya BECO oo laftigeeda ahayd isku darka shirkado badan oo korontada siin jiray magaalada Muqdisho.
Dacwadda ayaa ah in Shirkadaha la loolama ay si xun u fahmeen ugana faa’iideysteen tartanka labada dhinac, balse hadalkan cid walba oo maqasha aad ayeey ula cajiibeysay, maadama BECO aysan heysan wax caddeymo ah oo ku aaddan in shirkadahaas ay musuq iyo dhibaato si xun uga faa’iideysi kawadaan suuqa korontada ee gobolka Banaadir.
Warqadda Hoose ayeey gobolka gaarsiiyeen BECO oo maalgelin ahaan uu qayb iska leeyahay sheekh Axmed Nuur Jimcaalle oo ah sidoo kale saamilaha ugu wayn shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka shaqaysa.
HAddaba waakan Hoose ka akhriso warqadda dacwada ah ee BECO ka gudbisay shirkadaha la loolama.